DF Somaliya oo ku dhawaaqday inay berri oo Sabti ah Ciid tahay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo ku dhawaaqday inay berri oo Sabti ah Ciid tahay
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaliya ayaa ka laabatay go’aankii ay Caawa fiidkii qaadatay ee ahaa in aysan berri aheyn Ciid, islamarkaana tahay maalinta Koowaad Ciida ay tahay Berri oo SABTI ah.
Qaar ka mid ah Culimada dowladda ka tirsan iyo Masuuliyiinta Wasaaradda Diinta ayaa Caawa ku dhawaaqay in maalinta berri ah tahay Ciid.
Wasiirka Diinta Xukuumadda Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay ka laabteen go’aankii ahaa in aysan berri aheyn Ciid, islamarkaana berri ay tahay Ciid.
Dowladda ka hor waxaa ku dhawaaqay in ay berri oo Sabti ah Ciid tahay Ururka Al-Shabaab, Jubbaland, iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
CIID WANAAGSAN DHAMMAAN AKHRISTAYAASHA HALQARAN.com
Berri waa Ciid